खरसाङ महाविद्यालयमा 16 अगस्टदेखि स्नातकोत्तरको पढाई शुरू - खबरम्यागजिन
Homeखबरखरसाङ महाविद्यालयमा 16 अगस्टदेखि स्नातकोत्तरको पढाई शुरू
खरसाङ महाविद्यालयमा 16 अगस्टदेखि स्नातकोत्तरको पढाई शुरू
July 21, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
खरसाङ, 21 जुलाई।
खरसाङ महाविद्यालयमा पनि आगामी 16 अगस्टदेखि नेपाली भाषामा स्नातकोत्तरको पढाई शुरू हुने भएको छ। उक्त कुराको घोषणा महाविद्यालयका प्राचार्य डा. समीर बल अनि खरसाङ महाविद्यालय सञ्चालन समितिका सभापति डा. जस योञ्जन प्यासीले गरेका छन्। खरसाङ महाविद्यालयमा 204 औं भानु जयन्ती समारोह सम्पन्न भयो।
यस अवसरमा प्राचार्य डा. समीर बलले खरसाङमा महाविद्यालयमा नेपाली भाषामा स्नातकोत्तरको पढाई शुरू गर्न पर्ने आवश्यकतालाई हेरेर धेरै अघिदेखि आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्दै कागजपत्र चलाएका थियौँ भन्दै यसको आधारमा पश्चिम बङ्गाल उच्च शिक्षा विभागबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको बताए। उनले पढाई शुरू गर्न उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयबाट पनि निरीक्षण टोली आएर सम्पूर्ण निरीक्षण गरेर सबै व्यवस्थाको निम्ति तयारी गरिएको बताउँदै पहिलो वर्ष 20 जना विधार्थीहरू लिएर स्नातकोत्तरको पढाई शुरू गर्ने पनि बताएका छन्।
डा. समीर बलले भर्नाको लागि फारम कलेजको वेबसाइटमा आगामी 24 जुलाईदेखि उपलब्ध रहने अनि आगामी 16 अगस्टदेखि खरसाङ महाविद्यालयमा स्नातकोत्तरको पढाई शुरू गर्ने सोचेका छौँ भनी बताए। उनले आफ्नो वक्तव्यमा आदि कवि भानुभक्तको विषयमा पनि बताए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित कलेज सञ्चालन समितिका सभापति एवं खरसाङ महाविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक डा. जस योञ्जन प्यासीले पनि खरसाङ महाविद्यालयमा स्नातकोत्तरको पढाई शुरू हुने कुरामा खुशी व्यक्त गर्दै यसको लागि कलेज सञ्चालन समितिमा प्रस्ताव पारित गरिएको बताए। उनले यस कुरालाई प्राचार्य डा. समीर बलले सठीक पहल गरेको कारण खरसाङ महाविद्यालयमा स्नातकोत्तरको पढाई शुरू भइरहेको पनि जनाए।
डा. प्यासीले यहाँ स्नातकोत्तरको पढाई शुरू भएपछि यहाँको विद्यार्थीहरूलाई धेरै लाभ हुने तथा प्राध्यापकहरूको आवश्यकता रहने एवं लगभग6जनाजति प्राध्यापकहरू चाहिने पनि बताएका छन्। उनले आफ्नो वक्तव्यमा भानुभक्तको विषयमा बोल्दै भानुभक्तले हामीलाई नेपाली भाषा दिएर गए भन्दै नेपाली भाषाको प्रयोगमा हामी व्यावहारिक रूपमा अघि आउनुपर्ने बताए। उनले डा. कविता लामा सिक्किम विश्वविद्यालयको डिन पदमा नियुक्ति भएकीमा बधाई दिँदै डा. लामालाई आफ्नो सफल विद्यार्थीहरूमध्ये एक रहेको पनि बताए। प्राध्यापक तारा लोहार लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भानु जयन्ती समारोहमा स्वागत सम्भाषण प्राध्यापक सरस्वती मोहोराले राखिन् भने सञ्चालन प्राध्यापक योगेश खातीले गरेका थिए। कार्यक्रममा महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा रामायण पाठ, कविता पाठ, गीत र नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा समारोह अध्यक्ष प्राध्यापक तारा लोहार लेप्चा र प्राध्यापक गङ्गाप्रसाद भट्टराईले पनि वक्तव्य राखेका थिए।
अरण्य सप्ताह समापन
आजदेखि एसएफए प्रीमियर डिभिजन एस—लीग 2018 शुरू